Calool madhan? Wax walba ka baro dhaqankan isboorti | Ragga Stylish
Wax muddo dheer moodada noqday calool madhan. Dhimista dufanka iyo bilawga qalliinka bikini waa wax la sameeyo maalmahan. Mid ka mid ah farsamooyinka sida badan loogu dhaqmayo ayaa ah in la ordo iyadoo aan waxba la cunin oo la kaco. Sidan ayaan ku gubi karnaa dufanka badan, maadaama jidhku leeyahay heerar glycogen aad u hooseeya.
Waxaa jira khuraafaad badan oo ku saabsan in ay wanaagsan tahay iyo in kale in lagu ordo calool madhan. Ma rabtaa inaad ogaato runta ku saabsan dhaqankan? Qoraalkan waxaan uga gaabsaneynaa khuraafaadka, sii wad aqrinta iyo soo helidda 🙂
1 Isu dheellitirka jimicsiga iyo cuntada
2 Karbohaydraytyada iyo dufanka
3 Shidaalka jirkeena
4 Tilmaamaha iyo tilmaamaha si sax ah loogu ordo calool madhan
Isu dheellitirka jimicsiga iyo cuntada
Markay jimicsi isboorti bilaabmayso, jagooyin dhowr ah ayaa ka soo baxa mowduuca. Ugu horreyn, waxaa jira kuwa difaacaya 100% ku dhaqanka layliga su'aasha oo taxan dhammaan faa'iidooyinka. Dhinaca kale, kuwa wax liidaya ee diidaya faa iidooyinka isla markaana muujiya cilladaha ama khataraha suurtagalka ah ee ay u soo bandhigayso caafimaadka. Ugu dambeyntiina, dadkaas fuliya ama aan fulin iyaga oo aan ka fikirin, difaacin ama dhaleecayn.
Halkan waxaan ku abuureynaa muuqaal cusub oo isku dayaya inuu yeesho is waafajin kaliya ma ahan fikradaha ciyaartoyda, laakiin jirkeena. Sidaan horeyba u ognahay, leylis kasta waa la isku daraa dadaal, kharash tamar iyo waqti aan u hibeyno. Waxaan tamar ka helnaa cuntada waxayna kuxirantahay oo keliya inaan jimicsiyo qaarkood sameyn karno iyo in kale.
Ku orodka calool madhan waxay ficil ahaan socotaa ka dib markii ugu yaraan 8 saacadood la qaatay iyada oo aan la cunin wax cunto ah. Wixii jiray, kac, labis oo orod tag. Dad badan ayaa bilaaba howlahooda shaqo iyaga oo aan quraacan. Tan waxaa u sabab ah waqti la'aan ama gaajo hadda uun soo toosay. Waxa ugu caansan waa in la kaco, la diyaar garoobo oo la shaqo tago, horeyna saacad kadib ayaa loo quraacdaa.
Waqtiga aan soo toosno saacado badan kadib cunto la'aan, keydkeena karbohaydraytku aad ayuu u hooseeyaa. Tani waxay ka dhigan tahay in dadaalka ugu yar aan u leexan karno dufanka sida ilaha tamarta oo aan u gubno sida ugu dhakhsaha badan. Inta ay karbohaydraytyadu ku jiraan jidhka Waxay ku egyihiin inta udhaxeysa labo ilaa seddex saac jirka, dufanka waa kuwo aan xad laheyn.
Karbohaydraytyada iyo dufanka
Tamarta ku jirta karbohaydraytyada lama barbardhigi karo kuwa dufanka. Qof 70-rodol ah ayaa ordi kara afartan jeer ka badan Fogaanta tamarta ay dufanku siiso marka loo eego karbohaydraytyada. Tani macnaheedu maahan inaan leenahay tamar aan dhammaanayn oo ka timaadda dufanka is urursaday. Dufanku wuxuu u baahan yahay karbohaydraytyo uu ku hawlgalo. Markaan ku ordayno calool madhan, baruurta mooyee, waxaan sidoo kale gubnaa sonkor. Sababtaas awgeed, maadaama heerarka gulukoosta dhiiggu aad u hooseeyaan subaxnimadii, waxaan la kulmi karnaa dhibaatooyin daran oo aan sonkorta uga sii deyn karno dufanka.
Ma hilmaami karno in maskaxdeennu ay quudato oo keliya gulukoos. Tan macnaheedu waa orodka subaxdii wuxuu keeni karaa qatar ama wareer. Hawlaha soonka socda, waa inaan ku darnaa qodobo sida xoojinta iyo mudada jimicsiga, astaamaha qof walba iyo xaaladaha cimilada (Maalmaha guusha badan dadaalka lagu bixiyay socodku wuu ka weyn yahay).
Markaan bilaabayno inaan ku ordo calool madhan, jidhkeennu wuxuu gubaa waxa yar ee gulukoosta dhiigga ah ee aan ka tagnay iyo karbohaydraytyada. Markay tamarta ka dhammaato, waxaan bilaabeynaa inaan dufanno. Waa inaad sifiican u garataa qofka doonaya inuu sameeyo jimicsiga noocan ah iyo iska caabintiisa. Haddii awoodda socodku ay tahay eber ama hooseyso, waxaad u nuglaaneysaa inaadan si fiican u isticmaalin keydka tamartaada oo aad u wareerto.
Jidhkeenu wuxuu isticmaalaa shidaal kala duwan iyadoo kuxiran jimicsiga aan sameyneyno. Marka masaafada aan safreyno ay gaaban tahay oo xoogeeda uu sareeyo, jidhku wuxuu adeegsadaa karbohaydraytyo ahaan ilaha tamarta. Gulukooskan iyo beerka iyo muruqyada glycogen ee dhiigga ku jira ayaa loo isticmaalaa in lagu siiyo tamartaas. Dhinaca kale, haddii aan sameyno jimicsi muddo dheer soconaya iyo masaafo dheeri ah, waxaan u isticmaali doonnaa dufanka il tamar ahaan.
Tani waxay noo horseedaysaa dhamaadka. Soonka ma awoodi karno inaan orodno muddo dheer sababo la xiriira keydkeena gulukooska oo hooseeya iyo suurogalnimada wareer. Haddii aan cunno karbohaydrayt sarreysa, xitaa haddii aan sameyno layligan gaaban ee daran, dufan kuma gubeyno. Sababtaani waxay ka dhigeysaa xitaa mid aad muhiim u ah isku dheelitirka hawshan iyo cunno yar-karbohaydrayt ah. Taas bedelkeeda, haddii aan qaadno waddo dheer oo ka daran, waxaan heli doonnaa faa'iidooyin.
Tilmaamaha iyo tilmaamaha si sax ah loogu ordo calool madhan
Ciyaartoyda markii ugu horeysay ee waligood aan sameynin tababarkan, waxay ku habboon tahay in si tartiib tartiib ah oo tartiib tartiib ah loo tababaro. Markuu waqtigu idlaado, kordhiya masaafada iyo waqtiga loogu talagalay. Marka ciyaartooygu horeyba u tababaran yahay, gubashadiisa dufanka ayaa waxtar badan yeelan doonta sidoo kale wuxuu awoodi doonaa inuu keydiyo glycogen. Glycogen-kan ayaa muhiim u ah isbadalada tababarka. Tusaale ahaan, isbeddelada jiirada, wax ka beddelka xawaaraha tartanka ama waxqabadka orodka.
Tilmaamaha ugu fiican ee la siin karo si loogu dhaqmo dhaqankan sida saxda ah waa:
Ku bilow inaad sameyso jinsiyadaha soonka leh ee kaliya 4 saac kadib cuntada ugu dambeysay.
Fuuq wanaagsan ayaa had iyo jeer waa waajib.
Xawaarahaagu waa inuu ka gaabiyaa marka aad ku ordeyso calool buuxda.
Soo qaado xoogaa cunto ah haddii aad dareento wareer ama daciifnimo. Caafimaadkaaga ayaa ugu horreeya, haddii aad u muuqato mid daalan ama jimicsi kugu badan yahay, naso oo si tartiib tartiib ah u soo hagaag.
Markaad dhameysato orodka calool madhan, saacadda xigta tababarka kadib, waa inaad cuntaa cunto ku saleysan isku darka carbohydrateska iyo borotiinada. Tani waxay kaa caawin doontaa soo kabashada murqaha.
Ku orodka calool madhan waa dhaqan keena khataraha qaarkood. Kahor intaadan u cararin orod sidan oo kale ah, hubi inaad ku sugan tahay qaab jidheed oo wanaagsan oo ha ku xidhin. Doonista natiijooyin wanaagsan waqti yar gudahood ayaa ah sababta dad badani u fashilmaan. Adiguna, weligaa ma isku dayday inaad calool madhan ku oroddid?
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Calool madhan
Dhar mooddo shaati Hawaii ah